တရုတ် နှင့် တောင်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံအကြား လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန် သဘောတူညီ - Xinhua News Agency
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသည့် တရုတ်နိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတ ဝမ်ချီစန်း (ဝဲ) နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသမ္မတသစ် ယွန်းဆက်ယို တို့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေ ၁၁ ရက်က တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်စဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဆိုးလ် ၊ မေ ၁၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်ရောက်ရှိနေသည့် တရုတ်နိုင်ငံဒုတိယသမ္မတ ဝမ်ချီစန်းသည် တောင်ကိုရီးယားသမ္မတသစ် ယွန်းဆက်ယို နှင့် မေ ၁၀ ရက်တွင်တွေ့ဆုံကာ ရှေ့ဆက်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး နှင့် လက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် သဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
မေ ၁၀ ရက်နံနက်အစောပိုင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် တောင်ကိုရီးယားသမ္မတသစ်ယွန်း၏ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲသို့ တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဝမ်က တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယွန်းဆက်ယိုနှင့်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးစဉ်အတွင်း သူ့အတွက် သမ္မတရှီ၏ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား နှင့် ဆုမွန်းကောင်းတောင်းစကားများကို ဝမ်က တဆင့်ခံ ပြောကြားပေးခဲ့သည်။
တရုတ် နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့သည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ နှင့် အရေးပါသော မိတ်ဖက်များဖြစ်ကြသည်ကို အားလုံးက မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပင်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် နှစ်နိုင်ငံသံတမန်ဆက်ဆံရေး စတင်ထူထောင်ချိန်မှစ၍ ဘုံးအကျိုးစီးပွားများ တိုးတက်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အတူ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွင် လျင်လျင်မြန်မြန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့ကြောင်း ဝမ်ကဆိုသည်။
ကမ္ဘာ့အပြောင်းအလဲအခင်းအကျင်းတစ်ခုနှင့် ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်း ကြိုတင်မြင်နိုင်စွမ်းမရှိသော ကပ်ရောဂါတစ်ခုဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရချိန်တွင် တရုတ်-တောင်ကိုရီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရန်မှာ နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် ၊ ဒေသတစ်ခုလုံးအတွက်နှင့် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံအးတွက်ပါ ပိုမိုအရေးပါလာခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့သည်။
အမြင့်ဆုံးအဆင့်တစ်ခုသို့ တက်လှမ်းရန် တရုတ်-တောင်ကိုရီးယား မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက်တွန်းအားပေးမြှင့်တင်ရေးအတွက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားရန် တရုတ်နိုင်ငံက ဆန္ဒရှိကြောင်း နှင့် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီလုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
တရုတ်-တောင်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး နောင်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အဆိုပြုချက် ၅ ရက်ကို လည်း ဝမ်က အဆိုပြုခဲ့သည်။
ပထမအချက်မှာ တရုတ် နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့သည် မဟာဗျူဟာမြောက်ချိတ်ဆက်မှု နှင့် အမြင့်ဆုံးအဆင့်အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုများကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သင့်ပြီး အဆင့်တိုင်းတွင် ဆွေးနွေးမှု နှင့် အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုများကို ဆက်လက်အားကောင်းစေရမည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာ နှစ်ဖက်စလုံးက နက်ရှိုင်းပြီးလက်တွေ့ကျသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ၊ နှစ်နိုင်ငံ၏ မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ချိန်ညှိရေး မြှင့်တင်ရန် နှင့် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး အဓိကနေရာများနှင့် တတိယအဖွဲ့အစည်း ဈေးကွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းရန် ဖြစ်သည်။
တတိယအချက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့သည် ပထဝီမြေပြင်ချိတ်ဆက်နေသဖြင့် ၎င်းတို့ပြည်သူများသည် မိတ်ရင်းဆွေရင်း နှင့် ယဉ်ကျေးမှု သဘောသဘာဝတစ်ခု ဆက်နွယ်မှု ရှိကြောင်း ၊ နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ယင်းကို အခွင့်အလမ်းကောင်းအဖြစ် အပြည့်အဝ အသုံးချပြီး တရုတ်-တောင်ကိုရီးယား သံတမန်ဆက်ဆံရေး နှစ် ၃၀ ပြည့်နှစ် နှင့် တရုတ်-တောင်ကိုရီးယား ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ရေး နှစ်ကို ပြည်သူ နှင့် ပြည်သူချစ်ကြည်ရေး အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုအားမြှင့်တင်ရင်း ပိုမိုတက်ကြွစွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် အစီအစဉ်ချမှု အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
စတုတ္ထအချက်မှာ နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ညှိနှိုင်းမှုကို မြှင့်တင်ပြီး နိုင်ငံစုံဘက်ပေါင်းစုံဝါဒ နှင့် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးစနစ်ကို ဆုတ်ကိုင်ထားရန် ကတိကဝတ် နှင့် ဒေသတွင်း နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုကို မြှင့်တင်သွားရန်ဖြစ်သည်။
ပဉ္စမအချက်မှာ တရုတ်-တောင်ကိုရီးယား နှစ်ဖက်စလုံးသည် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ရေးရာများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် ညှိနှိုင်းမှုကို အတူ လက်တွဲတွန်းအားပေးရန် နှင့် ထလွယ်ရှလွယ်ကိစ္စရပ်များအား သင့်တင့်ကောင်းမွန်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင် ဆက်ဆံရေးမြှင့်တင်ခြင်း နှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မြှင့်တင်မှုကို နှစ်ဖက်စလုံးအား ထောက်ခံအားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလီးယားကင်းစင်ရေး တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ရေး နှင့် ကျွန်းဆွယ်တွင် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မာသော ငြိမ်းချမ်းမှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့်အတူခိုင်မာသောချိတ်ဆက်မှုတည်ဆောက်သွားရန် တရုတ်နိုင်ငံက အသင့်ရှိကြောင်း တရုတ်ဒုတိယသမ္မတ ဝမ်ချီစန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသမ္မတ ယွန်းဆက်ယိုက တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းစကားကို ဝမ်မှ တဆင့် ပေးပို့ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယား နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည် သံတမန်ဆက်ဆံရေး စတင်ချိန်မှစ၍ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး လျင်လျင်မြန်မြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်ကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေပင်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေလင့်ကစား နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် ကုန်သွယ်ရေးသည် ကာလတစ်လျှောက်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း ယွန်းက ဆိုသည်။
တောင်ကိုရီးယားအစိုးရအနေဖြင့် နှစ်ဖက်အပြည်အလှန်လေးစားမှုကို အခြေခံကာ သံတမန်ဆက်ဆံရေး နှစ် ၃၀ ပြည့်အခါသမယကို အခွင့်အခါကောင်းအဖြစ် မှတ်ယူပြီး အဆင့်အားလုံးတွင် အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုများ နှင့် အဆင့်မြင့်-မဟာဗျူဟာမြောက်ချိတ်ဆက်မှု အနီးကပ်မြှင့်တင်သွားရန် ၊ နယ်ပယ်အားလုံးတွင် အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုများ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆက်လက်တွန်းအားပေးရန် နှင့် ပြည်သူအချင်းချင်းအကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု မြှင့်တင်ရန် နှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအတွက် ခေတ်သစ်တစ်ခုကို အသုံးချသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ တည်ငြိမ်ရေး နှင့် သာယာဝပြောရေး မြှင့်တင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူလက်တွဲ၍ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်သွားရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
SEOUL, May 10 (Xinhua) — Visiting Chinese Vice President Wang Qishan and South Korea’s newly sworn-in President Yoon Suk-yeol agreed on Tuesday to further bilateral ties and pragmatic cooperation.
As Chinese President Xi Jinping’s special representative, Wang attended the inauguration ceremony of Yoon earlier in the day. During the meeting with Yoon, Wang conveyed Xi’s cordial greetings and best wishes to him.
China and South Korea, as close neighbors and important partners, have witnessed all-round and rapid development in bilateral relations with increasing common interests since the establishment of diplomatic ties, Wang said, adding that in the face ofachanging world andapandemic unseen inacentury, it’s of greater importance for both sides, the region and the whole world to strengthen China-South Korea cooperation.
South Korea is willing to strengthen communication and coordination with China to jointly promote peace, stability and prosperity on the Korean Peninsula, he added. ■
Photo – Visiting Chinese Vice President Wang Qishan (L) meets with South Korea’s newly sworn-in President Yoon Suk-yeol in Seoul, South Korea, May 10, 2022. (Xinhua/Li Tao)